» गाजाको कसुरमा जेल चलान भएका हरु छुटेको दिन मेरो हर्षको दिन हुनेछ!पुर्व सचिव भिम उपाध्यय गाजाको कसुरमा जेल चलान भएका हरु छुटेको दिन मेरो हर्षको दिन हुनेछ!पुर्व सचिव भिम उपाध्यय – हाम्रो खबर
गाजाको कसुरमा जेल चलान भएका हरु छुटेको दिन मेरो हर्षको दिन हुनेछ!पुर्व सचिव भिम उपाध्यय
काठमाण्डौँ। पछिल्लो समयमा चर्चित व्यक्तित्व नेपाल सरकारका पुर्वसचिव आदरणिय भिम उपाध्यायको विचार आम दर्शक श्रोताले हेर्दै सुन्दै आउनु भएको छ उहाँ सामाजिक सञ्जालम पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ र सरकारलाई झकझक्याएर विभिन्न वेतिथीहरुको उजागर गरिरहनु भएको छ।
वास्तवमा नेपाल सरकारको सम्मानित पदमा रहेर लामो समय विताएर रिटायर्ड लाईफमा पनि यति धेरै स’क्रिय हुनहुन्छ।साथै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको महाअभियानमा समेत हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय गाँ’जाको विशेषता गाँ’जाको उपयोगिता दिर्घकालिन दिगो आम्दानी तथ्य सहित गाँजा खेतिको बारेमा बोल्दै लेख्दै आउनु भएको भिम उपाध्यायको लेख अब सुरु हुन्छ।
गॉजा महाऔषध हो, वनस्पतिमा औषधीको पनि राजा। शिवलाई चढाईने ५ चिजमा गॉजा नं १ हो,सायद कुनै रोग होला सही त’रिकाले गॉ’जाको उपयोग गर्न सके निको नहुने। सायद कुनै चिज होला गॉ’जाबाट नबन्ने!पहिलो लुगा, पहिलो कागज र पहिलो बाईबल पनि गॉजाको कागजबाट बनेको थियो।
पानी जहाजको पर्दा क्यानबास पनि गॉजाको रेशाबाट बनेको थियो। हाम्रा ऋ’षिहरू दि’व्य बैज्ञा’निक थिए, हजारौँ वर्षअघि तिनले पत्ता लगाएका थिए गॉ’जा । तर पश्चिमा धू’र्त ब्यापारी राज’नीति अ’र्थशास्त्री र औ’षधी ब्या’पारीहरूले जा’नीजानी सु’नियोजित तवरले विगत ६ द’शकसम्म गॉजालाई खुब दुत्कारे।
कमजोर नेपाल ति’नकै पछि लाग्न बा’ध्य भयो। त्यसपछि ने’पालीहरूको ब्रे’नवास पनि सुरू भयो। ए’नजिओ हरू लाई उ’चालेर गॉ’जा क’डा ला’गू पदार्थ हो भन्ने अभियान चलाए। गॉ’जाको पक्षमा बो’ल्नेहरूको खुब मा’नमर्दन गर्दै गए।तर गॉ’जाको अ’वैध तरिकाले माग ब’ढ्न रोकिएन।
नेपालको गॉ’जा सजिलै युरो’पमा तस्करी भएर जादै गर्यो। वार्षिक रू ५० अ’र्बको गॉ’जा तस्करी हुने गरेको अनुमान छ। गॉ’जाको अ’वैध धन्दा गर्ने ठूला’ठालूहरू आ’जसम्म कोही प’क्राउ परेनन् बरू नि’र्बोध अ’बोध तामाङका छोराहरू, थारूहरू र यस्तै गरि’ब युवाहरू एकाध किलोमिटर केही किलो गॉ’जा ओ’सारिदिए वापत प’क्राउ परे।
अहिले ९ हजार त्यस्ता गरिब युवा नेपाल जेलमा कैदी छन्। तिनका परिवारमा कमाउने उमेरका स’न्तान जेलमा हुदा अ’ध्यारो छ- अ’चम्भित छन्, के भयो के गरे हाम्रा नानीहरूले? तिनले राम्रा व’कील राख्न सक्दैनन्। जे’लभित्र आ’जसम्म कोही ठालू गॉ’जा ब्या’पारी परेका छैनन् ।
नेता, प्र’शासक, सुरक्षा अ’धिकारी, ब्या’पारी र ठूला त’स्करहरूले कमाउनु क’माएका छन्,त्यो अवैध क’माईले ती शानले जिवन बि’ताईरहेका,रा’जनीति गरिरहेका र गॉ’जाकै बिरोध गरिरहेका छन्। देखिएका धुरन्धर गॉ’जा बिरोधी ती नै ए’कनम्बरी हुन्- गॉजा अ’वैध हुदा कमाई निरन्तर हुने, वै’ध हुदा क’माई सुक्ने।
नेपालमा गॉ’जा त जहॉतही पाईन्छ।
आफै उम्रन्छ, ने’पालमा गॉजा नपाईने ठाउँ नै छैन। शिव भगवानलाई हजारौँ वर्षदेखि पवित्र गॉ’जा चढाईन्छ । अनि यस्तो कुरा पनि कडा ला’गू पदा’र्थ हुन्छ भनेर नेपाली कसले विश्वास गर्नु! ने’पालमा रू ५ हजारमा पाईने १ केजी गॉ’जा भारतमा रू १५ ला’खसम्ममा बिक्छ, युरोप मा ५० ला’ख सम्ममा बिक्छ। गु’णस्तरीय नेपालको हिमालको गॉजाको मूल्य झन कति कति।
गॉ’जामा करिब ५०० वटा जिव’नोपयोगी र’सायन पत्ता लागेका छन्। आ’युर्वेदको आधार तत्व गॉ’जा हो तर यही गॉजा अवै’ध गरेपछि ने’पालमा आ’युर्वेद ध’रासायी हुदै गयो। सिं’हदरबार वै’द्यखनाले एक दर्जन प्र’भावकारी औषधी गॉ’जाबाट बनाएर प्र’भावकारी स्वास्थ्य सेवा गरेको पनि बन्द हुन भयो।
नेपालका गॉ’जाको नाम लियो कि हे’यदृष्टिले हेर्ने कु’सोच बिकसित हुदै गयो, गराईयो, विगत ४ दशकदेखि! ऋ’षिहरूको मा’नवोपयोगी बैज्ञा’निक खो’जको खिल्ली उडाईयो । तर ऋ’षिहरू भनेका स’नातन बै’ज्ञानिक हुन्, ज’बसम्म श्रृष्टि रहन्छ ऋ’षिज्ञानको सत्यता रहिरहन्छ।
संयुक्त रा’ष्ट्रसंघले अहिले हाम्रा ऋ’षिहरूको ज्ञानलाई स्वि’कारेर मा’नवतामाथि र हाम्रा पू’र्खाहरूमाथि न्याय गरेको छ। ६ दशकदेखि उल्टा हिडेको वि’श्वलाई गॉ’जा ज्ञान उ’जागर गरेर हाम्रो मान्यता बमोजिम नै सु’ल्टा हिड्नु ठिक हो भनेको छ।
गॉ’जाका लाभ बारे पुस्तकै लेख्न सकिन्छ । तर मलाई स’बैभन्दा महत्व र चॉ’सोको विषय गॉजाको आ’रोपमा नेपालका जेलमा को’चिएका ती अबोध ९ हजार कै’दीको उद्दार हुने समय कहिले होला त्यसमा छ। तिनका आफ्ना ५० हजार परिवारिक सदस्यका घरमा ती छुटेर टु’प्लुक्क पुग्दा आउने ध’पक्क उ’ज्यालोको छ। त्यो अझ क्षण म बढी खुशी हुनेछु